Meel lagu tabasho la'yahay ma jirto doorashadda - Xasan Sheekh | KEYDMEDIA ONLINE
Meel lagu tabasho la’yahay ma jirto doorashadda - Xasan Sheekh
Madaxweynihii hore ayaa sheegay in isaga iyo Sheekh Shariif ay ka shaqeynayaan xalinta tabashadda jufooyinka qaar ee Beesha Abgaal ay xalin doonaan.
CADALE, Soomaaliya - Xasan Sheekh, Madaxweynihii 8aad ee Soomaaliya oo ay wehliyeen Sheekh Shariif iyo Mas'uuliyiin kale oo kasoo jeeda Beesha Abgaal ayaa Maanta gaarey degaanno katirsan Shabeellaha Dhexe.
Isagoo boqolaal qof kula hadlay degaanka Cadale, ayuu Xasan Sheekh sheegay in ujeedka socdaalkooda uu yahay xalinta tabasho ay qabaan jufooyinka qaar ee Beeshiisa, kuwaasoo isku daya kuraasta Baarlamaanka dalka.
"Dalka iyo dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waa wada tabasho, meel lagu tabasho la'yahay ma jirto," ayuu yiri Xasan Sheekh oo rajo ka muujiyay heshiis in laga gaari doonin khilaafka ka taagan kuraasta Beesha Abgaal.
Kuraasta oo aad u yar iyo jufooyinka waa wada doonaya inay matelaad helaan ayaa keentay inuu soo baxo khilaaf iyo muran kuraasta qaar, sida midka uu ku fadhiyo Wasiirkii hore ee amniga Maxamed Abuukar Islow, oo jufadiisa ay leedahay dhaqanka, Imaanka Beesha Abgaal.
Xasan Sheekha ayaa ugu laab-qaboojiyay Beeshiisa in tabashadda doorashadda Soomaaliya ay tahay mid meel kasta taalla, balse iyagu ay hadda gogol fidiyeen Cadale, oo la isagu yimid odayaasha iyo siyaasiyiinta si xal waara looga gaaro muranka jira.